कहिले आउला ह्वावेको फाइभजी स्मार्टफोन ? - Nepal’s First News Agency
कहिले आउला ह्वावेको फाइभजी स्मार्टफोन ?
काठमाडौं: ह्वावेले हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको पी५० सिरिजको दुईवटा स्मार्टफोनमा स्न्यापड्रागन ८८८ र किरिन ९००० चिपसेट प्रयोग भएको छ । तर यी दुवै स्मार्टफोनले फाइभजीलाई सपोर्ट गर्दैन । दुवै स्मार्टफोनमा फोरजी नेटवर्कले मात्र काम गर्छ । यसले बजारमा अहिलेदेखि नै असर देखाउन सुरु गरिसकेको छ । ह्वावेले पी५० सिरिजको फोन सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै बजारमा फाइभजी सपोर्ट गर्ने ह्वावे मेट ३० र मेट ४० को मूल्य बढेको छ ।